IWayback Burger iza eWatertown, yakhela empumelelweni yaseTorrington - Wayback Burgers
IWayback Burger iza eWatertown, yakhela impumelelo yaseTorrington
I-Watertown maduze izojoyina amanye amadolobha angaphezu kweshumi nambili esifundazweni anendawo yokudlela yase-Wayback Burgers.
I-franchise entsha, ezoba se-1142 Main St., iyi-19th Wayback Burgers ezovulwa esifundazweni. U-Jia Zhou Lin, osebenzisa i-Wayback Burgers e-Torrington, uzothatha indawo entsha.
NgokukaPatrick Conlin, umongameli we-Wayback Burgers, uLin ubelokhu ekhula kakhulu kwi-franchise yase-Torrington futhi ucabange ukuthi kuyisikhathi esihle sokuvula indawo entsha.
“Usehlale endaweni yaseTorrington cishe iminyaka emihlanu futhi usanda kuqeda ukulungisa kabusha ngenyanga edlule,” kusho uConlin. "Ukuthengisa kwakhe kukhuphuke kakhulu, nangaphambi kokuba alungiswe kabusha, futhi yilokho okwamkhuthaza ukuthi afune ukwanda enze enye indawo."
Le ndawo entsha, ecishe ibe ngamamitha-skwele ayi-1,700, kulindeleke ukuthi ivulwe ekupheleni konyaka noma ekuqaleni kuka-2022. Izoba ngasohlangothini olulodwa lwenxanxathela yezitolo, phakathi kweNailzone neRadio Shack. Ukwakhiwa akukakaqali ebhilidini, ebekade lingenalutho. Phambilini bekuyi-Starbucks, esuke yakhuphuka ngomgwaqo.
UConlin ulindele ukuthi ukwakhiwa kuqale ezinyangeni ezintathu kuya kweziyisithupha, futhi unethemba lokuqasha abantu abangaba ngu-30 kuya ku-40 abazosebenza endaweni entsha.
Indawo entsha izoba nezihlalo zasendlini ezihlala abantu abangaba ngu-50, nezihlalo ezengeziwe ezingaba yi-10 kuye kweziyi-16 ngaphandle evulandi.
"I-patio inika isikhalazo esengeziwe kubavakashi abangadla ngaphandle, ikakhulukazi kulezi zinsuku," kusho uConlin, ebhekise kubhubhane lwe-COVID-19.
Ukwengeza, indawo yezitolo “isemgwaqweni omuhle ophithizelayo, ozungeze amadolobha aseMiddlebury naseWoodbury,” kusho uConlin. "Sikuthandile ukubukeka kwesikhungo nokubalwa kwethrafikhi kanye nezibalo zabantu."
Isitolo saseWatertown kuzoba yindawo yokuqala ukwakhiwa enomklamo omusha wangaphakathi, ngokusho kukaConlin.
Esinye sezici zomklamo omusha yisakhiwo esisha sekhishi.
"Ikhishi lalivame ukuba ngemuva kwendawo yoku-oda esiteshini," kusho uConlin. “Manje siligudluze ikhishi silibhekise ngemuva kwesitolo sokudla salifaka ngengilazi ngefasitela ukuze ukwazi ukubona ukudla okwenziwayo kodwa iphunga lokupheka aliphumi endlini yokudlela.
“Ngakho-ke, uma uhlezi ngaphakathi udla, uma ubuyela emotweni yakho, izingubo zakho azilizwa iphunga lama-hamburger namafrizi,” usho kanje.
Ngaphandle kwama-burgers, i-Wayback Burgers iphinde inikeze ama-steaks kashizi, amasemishi enkukhu nenhlanzi, ama-veggie burgers, amathenda enkukhu, amasaladi, nezinhlangothi, okuhlanganisa okuthosiwe, izindandatho zika-anyanisi, nama-milkshakes.
Esinye sezici ezidumile ze-Wayback, ngokusho kukaConlin, imikhiqizo enikezwa isikhathi esilinganiselwe, enikezwa kathathu noma kane ngonyaka.
"Sesizogoqa manje ngebhega ye-guacamole kanye ne-tangerine milkshake kanye ne-tangerine lemonade," esho.
Ukunikezwa kwesikhathi esilinganiselwe okuzayo ibhega ye-bourbon bacon kanye ne-caramel yethanga elinyakazayo.
Mayelana nokukhetha okunempilo, i-Wayback Burgers inikeza enye ibhega yenyama esekwe ezitshalweni.
"Abantu babheke ukunciphisa ukudla kwabo inyama bese betshala ezinye izindlela," kusho uConlin.
Esikhathini esingangonyaka esidlule, i-franchise yethula i-“Impossible Burger” ngesipho sesikhathi esilinganiselwe, kwathi ngoJanuwari, yabuyiselwa kumenyu lapho isiphenduke khona unomphela.
"Iyadla futhi inambitheka futhi iluma njenge-hamburger," kusho uConlin. "Kodwa ayikho nhlobo inyama kuyo."
I-Wayback Burgers, egubha iminyaka engama-30 kulo nyaka, ikomkhulu layo lise-Cheshire. Njengamanje isebenza ezifundazweni ezingama-31 ezinezindawo ezingaphezu kuka-166, kuzwelonke nakwamanye amazwe. Ngaphandle kwendawo yaseTorrington, amanye amadolobha aseConnecticut lapho i-franchise itholakala khona ahlanganisa iDanbury, Middletown, Norwalk, Orange, Stratford, Waterbury, kanye neWest Hartford. Zonke ziphethwe ngokuzimela.
Ibhizinisi linobambiswano kuzwelonke neBoys & Girls Clubs of America, lapho benza khona imali yeqembu futhi bahlele imicimbi yezingane, njengomncintiswano wokuqamba amagama.
“Amakhasimende amaningi ayakuthanda ukudla,” kusho uLin, isakhamuzi saseTorrington. "Bathanda ama-burgers amasha."
“Sijabule kakhulu ukuletha uWayback Burgers eWatertown futhi sibheke ngabomvu ukumema zonke izivakashi endaweni yethu yokudlela,” kusho uConlin. “Asisakwazi ukulinda ukuthi sivuleleke futhi sikwazi ukusebenzela umphakathi.”